Hatsikana an-tsehatra :: Toran’ny hehy ireo mpanotrona ny “Lampihazo” fahefatra • AoRaha
Hatsikana an-tsehatra Toran’ny hehy ireo mpanotrona ny “Lampihazo” fahefatra
Tontosa ny tolakandron’ny sabotsy lasa teo, tetsy amin’ny Institut Français de Madagascar (IFM) Analakely, ny “Lampihazo” fahefatra. Niova endrika kely izany satria ny tontolon’ny hatsikana no nomena sehatra tamin’ity indra mitoraka ity.
Tena nahatsikaiky ny fampisehoana. Toran’ny hehy tanteraka ireo rehetra nahita sy nihaino an’i Sombiniaina sy César Legrand. Niendrika tantara an-tsehatra ny hatsi-kana sasany nolalaovin’ireto mpanakanto tanora miezaka mametraka ny anarany amin’ny tontolon’ny fampihomehezana ireto.
Nofosain’izy ireo tao ny fihetsika sy ny zava-misy manodidina ny tanora. Ankoatra izay, nanana ny anjara toerany ihany koa ireo hatsikana miresaka ny zava-miseho amin’ny fiainana andavanandro, toy ny fandraisana zava-maha-domelina sy ny zava-miseho any an-tsekoly ary ny fahitalavitra sasantsasany. Tsy nirona be loatra tamina karazana hatsikana masirasira kosa ireto mpanakanto ireto na dia tsikaritra fa niandry fatratra izany aza ny ankamaroan’ny teny am-pitoe-rana.
Raha refesina tamin’ny kakakaka tao anaty efitrano, dia nahasarika ny rehetra ny hatsikana natosaka tao. Niezaka nitana ny tsiky sy ny tokelaky ny mpijery hatramin’ny farany ireto tanora manan-talenta ireto. Ny haizina nandondom-baravarana aza no nisarahana fa nahafaly ny mpijery ny fiarahana tamin’i Sombiniaina sy César Legrand.
Filalaovana soradihy :: Hampiseho ny “Mitsangana” any Etazonia i Gwen Rakotovao
Fampisehoana sy korana :: Notohizan’ny dihy ny fiarahana tamin’i Njakatiana sy Arison Vonjy